Telefaona: + 86-769-8122 6809
Telefaona: +86 136 6298 7261
Gel Eyes Eyes
Nahavita kanto fantsika tamin'ny gel gel UV ve ianao?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-27
Fantatry ny ankamaroan'ny olona fa ny fantsika dia ampiharina rehefa manao zava-kanto, fa inona marina ity firafitry ny fantsika? Ny gel poloney dia fantatra amin'ny anarana hoe gel poloney UV, izay vokatra nohavaozina tamin'ny fantsika. Ny firafitry ny gel poloney dia misy resin fototra, photoinitiator, ary doka isan-karazany ...
Ampaherezo ny gel fantsika gel sy ny gel vita amin'ny palitao ambony
Ny karazany sy ny fomba fanao amin'ny fantsika poloney izay matetika ampiasaina amin'ny zavakanto dia ny: gel palitao ～ fanamafisana gel ～ 2 dingana ary 3 dingana poleta fantsika gel gel Top coat gel Famafisana ny gel ny hoho sy ny gel an-tampon'ny akanjo dia gel tena ilaina roa amin'ny zavakanto. Noho ny asany samihafa, samy hafa ihany koa ireo dingana ampiasaina ...
Fahalalana momba ny famokarana UV Nail Gel Poloney
Nail Gel poloney Nail Gel poloney, fantatra ihany koa amin'ny hoe UV polish nail, dia be mpampiasa tamin'ny indostrian'ny fantsika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Noho ny toetra mampiavaka ny fantsika poloney raha oharina amin'ny poleta amin'ny menaka fantsika amin'ny ankapobeny, ny lokon'ny hatsarana loko miloko vaovao dia sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy poizina, mahasalama ary ...
Ny Nail Art miaraka amina poloney gel UV, tsara tarehy sy mahatalanjona ny loko
Ny tovovavy dia tia hatsaran-tarehy amin'ny natiora. Ilaina ny mitafy ny tenanao isan'andro. Ankoatry ny fifantohana amin'ny fitafiana dia azonao atao koa ny manandrana fomba isan-karazany amin'ny Nail Art amin'ny alàlan'ny fampiasana Uv Gel Polish mba hampivoatra ny tenanao. Amin'ny maha mpanamboatra ny vokatra gel UV tsara indrindra dia asehonay eto sy ...
2021 Tatitry ny famakafakana ny tsenan'ny indostrian'ny Nail
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-12
Ny indostrian'ny zavakanto dia misy sisiny tombony lehibe. Araka ny tatitra nataon'ny mpikaroka matihanina, ny tsenan-javakanton'ny fantsika eto amin'ny fireneko dia mivoatra haingana amin'ny taham-pisondrotana 200% isan-taona. ny fireneko manana vondrona mpanjifa goavambe. Ny indostrian'ny fantsika dia ekena ho tombony be ...
Fomba hanasarahana loko kanton'ny zava-kanto roa miaraka amin'ny vokatra poloney
Betsaka ny olona no mieritreritra fa ny hoho miloko marevaka dia tokana, noho izany ianao dia mety manandrana fifandonana misy loko roa na maro loko, fa raha ny tena izy, ahoana no ahafahana misaraka voajanahary ireo loko roa amin'ny zavakanto? Nofintiniko ireo fomba sy tetika ireo ho an'ny rehetra. Ny lamaody hoho dia nanjary lamaody sy kilasy. ...
Ohatrinona ny vidin'ny fanaovana Art Nail? Izay Nail Art dia mora sy tsara tarehy
Ankizivavy maro no maniry hanao taokanto ho lasa fotsy ny rantsan-tànany, saingy tsy hain'izy ireo hoe ohatrinona ny vidin'ny fanaovana hoho, ka matetika izy ireo no mahatsapa fa voafitak'ilay manicurist aorian'ny nanaovany ny haza. Ity ny salanisa antonony ny kanto misy ifandraisany amin'ny referansao. Amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny vokatra ...
Hihombo sy hihombo ve ny hoho rehefa manao zava-kanto amin'ny hoho?
Ankizivavy maro no mieritreritra fa ny fanaovana taokanto dia hanao izay hahatonga ny hoho ho mahia sy mahia, ho mora vaky, ary hitondra fahasahiranana eo amin'ny fiainana. Ka izany tokoa ve no izy? Ny tovovavy tia fantsika dia tsy afaka miandry ny manova ny hoho isan'andro, nefa miaraka amin'izay dia misy vondron'olona tsy te ...
Inona avy ireo gel telo tena ilaina amin'ny ozatra ho an'ny salon
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-02-25
Ho fanampin'ny fitaovana fototra sasany hanokafana salon hoho dia ilaina ny vokatra sy jiro poleta fantsika. Avy eo fantatrao ve hoe inona ireo poleta telo tena ilaina amin'ny fantsika? Amin'ny toe-javatra mahazatra, mila manamboatra marika polon'ny gel fantsika farafahakeliny farafaharatsiny ianao mba hanokafana salon fanaovana fantsika. Karazana fantsika telo ...
Torohevitra momba ny poloney art nail fantsika nefa tsy mampiasa jiro
Ilay angano kely izay matetika manao zava-kanton'ny fantsika amin'ny vokatra poloney dia tokony ho fantany fa isaky ny ampiharina ny gel amin'ny fantsika dia mila hafanaina sy hamafisina ao anaty jiro fanaovana mofo izy, ka fantatrao ve hoe inona ireo toro-hevitra amin'ny fampandehanana ny fantsika gel ao an-trano nefa tsy manendy jiro? Amin'ny ankapobeny, fantsika s ...
Miresaka momba ny vokatra poloney UV
avy amin'ny admin tamin'ny 21-02-07
Nail poloney UV gel, efa be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fantsika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Noho ny toetra mampiavaka ny fantsika poloney raha oharina amin'ny poloney amin'ny fantsika mahazatra, ny fantsika gel gel UV dia sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy poizina, salama ary azo antoka. Ankoatr'izay, mifanaraka amin'ny tombony iraisan'ny rehetra ...
Sokafy ny "Mode New Year"! Miroborobo eo akaikin'ny Fetin'ny Lohataona ny indostrian'ny hatsaran-tarehy sy ny hoho
avy amin'ny admin tamin'ny 21-02-01
Rehefa manakaiky ny Fetiben'ny Lohataona dia maro ny olom-pirenena no nanomboka nividy ny entin'ny Taom-baovao, ary ny Taom-baovao mahafinaritra dia mbola zavatra mampafana indrindra ho an'ny rehetra teo aloha. Ny mpitia hatsaran-tarehy koa dia sahirana miakanjo alohan'ny Taom-baovao. Ankoatra ny fividianana akanjo vaovao sy fanovana taovolo, a ...
Newsletter Araho hatrany ireo fanavaozana
Faritra indostrialy, tanànan'ny Xiaohe, Daojiao, Dongguan, GD, Sina